सीडीओको फेसबुक च्याटबाट बागेनिङ :फेसबुक ह्याकगरी हिन्दीमा च्याट गर्ने को हुन् ? मेसेज सहित | शुभयुग
सीडीओको फेसबुक च्याटबाट बागेनिङ :फेसबुक ह्याकगरी हिन्दीमा च्याट गर्ने को हुन् ? मेसेज सहित
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ आश्विन १४, बुधबार (१ साल अघि)
१४ असोज, सर्लाही – गत सोमवार सांझ सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सुरेन्द्र पौडेलको फेसबुक म्यासेन्जरबाट रिलाइबल लाइफ इन्सुरेन्सको सप्तरी शाखामा कार्यरत बालकृष्ण मण्डललाई ‘हाइ’ भन्दै सन्देश आएपछि मण्डल अचम्ममा परे ।
एक्कासी सीडीओ सुरेन्द्र पौडेलको मेसेन्जरबाट ‘हाइ’ भन्दै हिन्दीमा बेतुकका कुरा गर्न थालेपछी उनी झन् आश्चर्यमा त्यतिबेला परे । गत सोमबार साँझ सवा ५ बजे सीडीओ पौडेलको नामको म्यासेन्जरबाट सन्देश आएको मण्डलले बताए । “सिडियो सापले मेसेज गर्नुभो भन्दै खुसी मान्दै च्याट गर्ने क्रममा उताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने कुरा आएपछि भने शंका लाग्यो ।” मण्डलले भने ।
सिडिओले हिन्दीमा कुरा गर्दै ‘एक काम कर दो,’ भन्दै यस्तो लेखेपछि मण्डलले पनी ‘के सर, भन्नु न ।’ भन्दै मेसेज लेखेको मण्डलले उपलब्ध गराएको च्याटको स्क्रिनसुटमा देख्न सकिन्छ ।
मेसेजमा भएको संक्षिप्त कुराकानी
सिडिओ : ‘पेटिएम यूज करते हो ?’
मण्डल : ‘छैन सर, मोबाइल बैंकिङ मात्र छ’
सिडिओ : ‘हा’
शंका लागेर मण्डलले, ‘हजुर को हो ?’ सोधेपछी फेरी जवाफ आयो, ‘कुछ पैसा ट्रान्सफर करवाना था ।’ त्यसपछी मण्डलले पनी हिन्दीमा सोधेका छन्, ‘आप हो कौन ?’ त्यसपछि भने कुनै जवाफ नआएको हामीलाई मण्डलले उपलब्ध गराएको मेसेजमा देख्न सकिन्छ ।
यता उक्त विषयमा सीडीओ पौडेलसँग प्रश्न गर्दा उनले यस्तो च्याट आफूले नगरेको बताएका छन् । ‘मलाई त केही जानकारी नै छैन’ सिडिओले भने, ‘यसबारेमा बुझ्न लगाएको छु ।’ उनले भने ।
उता बालकृष्ण मण्डलले भने सीडीओबाट सन्देश आएको ठानेर आफूले कुरा गरेको बताए । तर लगातार हिन्दीमा कुरा गर्दै रकम ट्रान्सफरको कुरा गरेपछि आफू झस्किएको उनले बतायो । आफुलाई मेसेजमा नानाभाँती कुरा गर्न थालेपछी सिडिओ सापको नक्कली फेसबुक हुनसक्ने ठहर गरेको मण्डलले बताए ।
‘सुरेन्द्र सर पहिले सप्तरीमा पनि सीडीओ भएर बस्नुभएकाले खुशी भएर कुरा गरेको थिएँ,’ उनले भने । मण्डल रिलाइबल लाइफ इन्सुरेन्सको सप्तरी शाखामा कार्यरत छन् ।
सिडिओ पौडेल र बालकृष्ण मण्डलबीचको मेसेज जस्ताको त्यस्तै